Kuvhima mukombe weBotswana kwakavhima nzou mazana matatu nemakumi mashanu neshanu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kuvhima mukombe weBotswana kwakavhima nzou mazana matatu nemakumi mashanu neshanu
Nhau Nhau • Botswana Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nzou dzinosvika makumi matatu nesere nemakumi masere neshanu dzakabayirirwa mugore rapfuura, zvisinei, hurumende yeBotswana yakangogadza kota yegore negore yenzou mazana mana kuurawa nevanovhima mukombe uye vanofunga kugadzirisa CITES rondedzero yenzou yeAfrica kuti ibvumidze kutengeserana nenyanga dzenzou.
"Pakave nekuwedzera kwekuvhima, izvo zvatinobvuma", akadaro Kitso Mokaila (Gurukota reZvakatipoteredza neZvezviwanikwa, Conservation uye Tourism) mubvunzurudzo yeCNN ichangoburwa. Nekudaro, hurumende inoita kunge isiri kubvuma zvizere huwandu hwekuuraya vanhu kumakuva huri kuitika muBotswana kana kuti kuvhima mukombe kuchawedzera izvi.
Humbowo hweanosvika mazana matanhatu muzana ezviyo zvitunha nzou, zvakabayirwa mukati megore ra600-2017, zvinoratidzwa mupepa rakaongororwa nevezera ravo "Humbowo hweDambudziko Rinokura reNzou yekuuraya muBotswana”, Yakaburitswa mupepanhau reNext Biology.
Zvizhinji zvezvitunha zvevanhu vanofungidzirwa kuti vakauraya vanhu zvakawanikwa panguva yeongororo yemuchadenga ya2018, zvakasimbiswa pasi naDr Mike Chase neboka rake reElephants Without Border (EWB) uye vese vakaratidza zviratidzo zvinotyisa zvehuzhinji. Dehenya ravo rakabvarurwa nematemo kubvisa mazamu uye miviri yavo yakaremara yakafukidzwa nematavi kuti vavanze humbowo. Dzimwe nzou dzakatodimburwa mitezo kuti dzigadzikane mhuka dzaive pachena kuti dzichiri vapenyu ivo vavhimi vachibvisa meno avo.
Iwo mazinga ehuchenjeri akawanikwa neEWB panguva yavo yekuongorora zvemuchadenga inoshungurudza zvakanyanya. Chase (Muvambi neMutungamiriri - EWB) vakati "humbowo huri mubepa iri haurambike uye hunotsigira yambiro yedu yekuti nzombe dzenzou dziri kuurawa nezvikwata zvekuuraya vanhu muBotswana; Tinofanira kuvamisa vasati vasimba.
Yese nzou yakabiwa yakawanikwa naChase nechikwata chake yaive nzombe yakura pakati pezera ramakore makumi matatu-30 nemaburi makuru akakosha zviuru zvemadhora pamusika mutema.
Vavhimi vanovhima zvisiri pamutemo nevanohwina mukombe vane sarudzo yakajeka yenzou hombe uye dzakura dzenzou dzine mazi muhombe, idzo dzinowanzove nzombe dzakapfuura makore makumi matatu nemashanu. Mombe idzi dzakakosha zvakanyanya kune iyo magariro enharaunda yenzou, ku Photographic safari indasitiri uye nekusimudzira kwenguva refu kwema trophy yekuvhima indasitiri pachayo.
Nekudaro, huwandu hwekuvhima hwenzou mazana mana, hunowedzerwa neanenge mombe dzakawanda dzakabayirwa, hunogadzikana?
Huwandu hwenzombe dzakakura muBotswana hwakapoteredza makumi maviri nemazana matanhatu, maererano ne EWB 2018 kuongorora kwemuchadenga. Pakupedzisira, zviuru zvitanhatu zveavo mabhuru akura kupfuura makore makumi matatu nemashanu.
Kana Mutungamiri Mokgweetsi Masisi achivhura mwaka wekuvhima mukombe, Botswana inogona kurasikirwa nenzombe mazana masere nemakumi manomwe neshanu kune vese vavhimi vemukombe nekuvhima. Mune mamwe mazwi, 785% yenzombe dzakura uye dzinonyanya kuita zvepabonde dzichabviswa kubva munzou pagore.
Vavhimi pachavo vanotenda kuti huwandu hwe0.35% yehuwandu hwevanhu, kana ingangoita 7% yenzombe dzakura, ndiyo yakakwenenzverwa "off-take" isina kurasikirwa nehukuru hunodiwa hwechiganda. Zvisinei, izvi hazvitarisise “zvekutora” zvakawedzerwa nekuda kwekuvhima zvisiri pamutemo, izvo zvinoita kuti huwandu hwazvino muBotswana hwande zvakapetwa neuviri ”uhu hunogara huripo.
Kunyangwe kana huwandu hwekuvhima husingawedzerwe, zvinotora makore manomwe chete kusvika masere kubvisa nzou dzese dzakura, izvo zviri pachena kuti hapana kwazvinosvika.
Iyo pro-yekuvhima yekutandarira inokurumidza kupokana kuti iyo poaching inoitika nekuti mvumo yekuvhima yakasiiwa yakasiiwa. Nekudaro, poaching muBotswana yakangotanga kuwedzera imwe nguva mukati megore ra2017, makore matatu akazara mushure mekumisikidzwa kwekuvhima.
Kukura kwevanhu chaiko kunodzora kukanganisa uku, asi munzvimbo idzo dzinoitika kuvhima nekuuraya mhuka, nzombe dzakura dzinodzikiswa zvakanyanya, zvinova zvine chekuita nemagariro enzvimbo dzenzou idzi.
Dr Michelle Henley (Director, Co-founder uye Principal Researcher - Elephants Alive) vanoti "mabhuru ekare ane budiriro yepamusoro paternity, anokurudzira kubatana kweboka, anoshanda sevapi vemazano mukati memapoka ebachelor, uye anodzvinyirira musth munhabvu diki".
Iyo yekupedzisira inonyanya kukosha, sezvo kusavapo kwenzombe diki kunoreva kuti mudiki anouya musth nekukurumidza, zvichivaita vangangoita hasha. Hasha idzi dzinogona kutungamira mukukakavadzana kweHuman-Elephant Conflict, iyo nyaya iyo hurumende yeBotswana inotarisira kudzikamisa nekudzosa zvakare kuvhima mukombe.
Iyo yenguva refu-yekusarudzika "kubvisa-kutora" kwemahombe makuru inokanganisawo kusiana kwenzou dzenzou, zvichitungamira kune vanhu vane tunyoro tudiki uye kunyange nzou dzisina tambo. Iko shanduko mumageneti haingokanganisa chete kurarama kwenguva refu kwenzou idzi, asi zvakare ine mhedzisiro yakanangana nekusimudzira kwemuchina wekuvhima indasitiri pachayo.
Kuurayiwa zvisiri pamutemo kwenzou dzenzou dzadzo kwakasvika kumazinga asingagadzirike muAfrica yese, uko huwandu hwenzou dzakaurawa zvisiri pamutemo izvozvi zvinodarika kubereka kwechisikigo. Zvinofungidzirwa kuti nzou imwe inourawa maminetsi makumi matatu.
Kunyangwe hazvo nzou dzakaurayiwa munzvimbo zhinji dze Africa kwenguva yakati rebei, huwandu hwenzou dzeBotswana hwave hwakagadzikana kana kushoma kubva kutanga kwegore ra2010 ine huwandu hwakagwinya hwenzou dzinosvika 126,000.
Chase akati, “Ndine chivimbo chekuti vese vane chekuita vanokwanisa kushanda pamwechete kuita matanho akakodzera ekudzora humbavha. Pakupedzisira, Botswana ichatongwa kwete nekuda kwekuva nedambudziko rekuvhima, asi nekuti rinozvibata sei. ”
SOURCE: Kuchengetedza Chiito Trust